Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Yemen » Dagaalka COVID-19 ee Yaman: WHO iyo KSRelief oo isku biiray xoogaga
Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan • Wararka Yemen
dagaalka COVID-19 ee Yemen
COVID-19 waa u nuglaanta caafimaadka bulshada ee Yemen oo sidoo kale la il daran dhibaatada bani'aadamnimo ee ugu xun adduunka. Tirada aadka u liidata ee 80 boqolkiiba dadka ayaa u baahday gargaar bani'aadamnimo sanadkii la soo dhaafay. Iyada oo kaliya kala bar xarumaha caafimaadka ay shaqeynayaan, nidaamka caafimaadka ayaa qarka u saaran inuu burburo.
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo Xarunta Gargaarka Bani’aadamnimada ee Boqorka Salman iyo Xarunta Caawinta (KSRelief) waxay ku midoobeen la-dagaallanka COVID-19 ee Yemen iyada oo loo marayo mashruuc cusub oo lagu taageerayo diyaargarowga iyo jawaab-celinta COVID-19.
Abaalmarintan cusub, WHO waxay la shaqeyn doontaa Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha iyo Dadweynaha si ay awood ugu yeelato ogaanshaha iyo jawaab-celinta deg-degga ah ee kiisaska COVID-19 iyo kooxo, oo ay ku jiraan iyada oo loo marayo isku-dhafan, iskudubarid dhinacyo badan leh heerarka dhexe iyo heerarka gobollada iyo taageerada xarumaha hawlgallada degdegga ah (EOC) guud ahaan dalka. Lix iyo labaatan meelood oo laga soo galo dalka Yemen ayaa la qalabeyn doonaa si ay awood ugu yeeshaan ogaanshaha degdega ah ee COVID-19.
Thanks to iskaashigan, taageerada muhiimka ah ayaa la sii wadi doonaa in lagu bixiyo kormeerka iyada oo la taageerayo kooxaha COVID-19 ee jawaabaha degdegga ah ee degmooyinka mudnaanta sare leh. Intaas waxaa sii dheer, taageero dheeri ah ayaa la siin doonaa 1,991 goobo sir ah oo ka warbixinaya Nidaamka Digniinta Hore ee Cudurka Elektarooniga ah (EIDEWS). Nidaamkan dabagalka wuxuu ururiyaa macluumaad ku saabsan cudurrada faafa ee u nugul si loo kiciyo waxqabadyada caafimaadka bulshada ee degdegga ah si loo yareeyo cudurrada iyo dhimashada iyada oo loo marayo ogaanshaha hore iyo jawaabta degdegga ah ee cudurrada dillaaca, oo ay ku jiraan COVID-19.
Mashruuca wadajirka ah wuxuu kaloo kobcin doonaa awoodda baaritaanka shaybaarada dhexe ee caafimaadka bulshada (CPHL) ee dalka oo dhan wuxuuna taageerayaa kahortagga gudbinta COVID-19 ee goobaha caafimaadka iyo kuwa aan caafimaadka ahayn. Taageero dhinacyo badan leh oo la siinayo xarumaha caafimaadka ayaa hagaajin doonta awooddooda ay ku qaabisho bukaannada COVD-19 iyadoo la siinayo sahay caafimaad & qalab iyo tababar maaraynta kiisaska shaqaalaha caafimaadka.
“Waad ku mahadsan tahay tabarucan cusub ee ka socda KSRelief, WHO waxay awood u yeelan doontaa inay bixiso taageero dhammaystiran oo ku saabsan jawaabta qaran ee Covid-19. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay xilligan maadaama WHO iyo la-hawlgalayaasha caafimaadka ay isu diyaarinayaan inay soo kordhaan cuduro cusub, ”ayuu yiri Dr. Adham Ismaaciil, Wakiilka WHO ee Yemen.
Mashruucan oo lagu maalgeliyey US $ 13 milyan, ayaa qayb ka ah heshiis ballaadhan oo US $ 46 milyan ah oo u dhexeeya labada hay'adood, oo la kala saxeexday bishii Sebtember 2020, kaas oo ay ka mid ahaayeen saddex mashruuc oo kale oo ku saabsan nafaqada, biyaha iyo adeegyada fayadhowrka deegaanka, iyo gaarsiinta adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah. .
KSRelief waxay ahayd lamaanaha ugu weyn ee maalgalinta WHO Yemen sanadihii 2019 - 2020. Laga soo bilaabo Oktoobar 2019, iskaashiga ka dhexeeya labada urur wuxuu gacan ka geystey ilaalinta nidaamka caafimaadka Yemen, oo ay ka mid tahay taageerada kuwa ugu nugul. Taageero joogto ah oo ka socota KSRelief ayaa u oggolaatay WHO inay fududeyso bixinta daawooyinka nafaha lagu badbaadinayo, oo ay ku jiraan daaweynta bukaanada qaba xaaladaha daba dheeraaday, nolosha halista ku ah, sida kansarka iyo kelyaha oo shaqeynaya. Wadashaqeyntu waxay kaloo taageertay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, oo ay ku jiraan caawinta haweenka uurka leh ee dhalmada oo ammaan ah
Ku saabsan dhibaatada bini'aadanimo ee Yemen
Yemen ayaa weli ah dhibaatada bina-aadamnimo ee ugu xun adduunka iyo hawlgalka ugu adag ee WHO. Ilaa 24.3 milyan oo qof - 80% dadka - waxay u baahdeen gargaar bani'aadamnimo ama ilaalin sannadka 2020.
Nidaamka caafimaadka ayaa qarka u saaran inuu burburo. In ka badan 17.9 milyan oo qof (marka loo eego tirada guud ee dadweynaha 30 milyan) ayaa u baahday adeegyo daryeel caafimaad sannadka 2020. Isla mar ahaantaana, kalabar xarumaha caafimaad oo keliya ayaa si buuxda ama qayb ahaan u shaqeeya. Kuwa sii furnaanayaa waxay la'yihiin shaqaale caafimaad oo tayo leh, dawooyinka lagama maarmaanka ah iyo qalabka caafimaadka, sida maaskaro iyo gacmo gashi, ogsijiin iyo agabyada kale ee lagama maarmaanka ah
COVID-19 ayaa salka ku haya dayacanka caafimaadka bulshada ee Yemen. Laga soo bilaabo 26 Janaayo 2021, maamulayaasha caafimaadka ee Yemen waxay soo sheegeen 2,122 xaaladood oo la xaqiijiyay oo ah COVID-19, oo ay la socdaan 616 dhimasho la xiriirta. Wada-hawlgalayaasha caafimaadka ayaa ka walaacsan in warbixintu weli ka socoto meelaha qaarkood ee dalka sababo la xiriira maqnaanshaha goobaha baaritaanka, daahitaanka daaweynta, daah-furnaanta, adkaanta helitaanka xarumaha daaweynta ama khataraha la dareemayo ee raadinta daryeelka. Intaa waxaa sii dheer, waxay tilmaami kartaa infekshannada weyn ee asymptomatic ee aan weli laga ogaan waddanka. Wada-hawlgalayaasha caafimaadka ee dhulka ayaa sii wadaya ka shaqeynta kor u qaadista ilaalinta; keenista shaqaale u heellan COVID-19 hay'adaha dhexdooda; la socoshada saameynta fayrasku ku leeyahay barnaamijyada mudnaanta koowaad leh ee caafimaadka; turxaan bixinta farriinta si loo dhiirrigeliyo isbeddelka dhaqanka; iyo kor u qaadista awoodda waaxda daryeelka degdegga ah (ICU).